Afovoany Atsinanana: Ny fivoaran’ny Mofomamy kely Cupcake · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2009 12:08 GMT
Sarina mofomamy kely knafeh cupcake avy amin'i Frankom, cupcake avy amin'i Glaze (Kuwait)
“Eny, Miresaka momba ny mofomamy kely cupcake isika” no lohateny nentin'ny New York Times amin'ity herinandro ity. Ny lahatsoratra miaraka aminy dia manamarika ny fitombon'ny lazan'ny fivarotana mofomamy kely manerana ny faritra Afovoany Atsinanana iny, nanendrena ny an'i Sugar Daddy ho fivarotana mofomamy kely malaza ao Amman , miaraka amin'ny fitondrana mofomamy kely hanana ny lazany tao amin'ny faritra (efa niparitaka tonga any Dubai sy i Beyrouth koa izao ny toeram-pivarotana ) ary manomboka ny fivoaran'ny mofomamy kely.
Tsy ny New York Times irery ihany no nanomboka niresaka momba ny mofomamy kely cupcake tato ho ato. Nahita fahazarana amin'ny fanaovana azy ho tsindrin-tsakafo ihany koa ny mpampiasa bilaogy any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy ny ivelan'izany. Frankom, mpampiasa blaogy Kuwaiti dia nanoratra hoe niangaviana izy hanandrana ny mofomamy kely cupcake avy eo an-toerana mifototra amin'ny tsindrin-tsakafo araky ny fomban-drazana, ireto misy vitsivitsy [ar]:
Kunafa eo ambony mofomamy kely cupcake avy amin'ny fetam-boanjo
Baqlawa eo ambony mofomamy kely cupcake avy amin'ny walnut [FM: toy voa-na mahabibo angamba izy ity]
Rahash mofomamy kely cupcake voasesika rahash
Halwa mofomamy kely cupcake voasesika halwa
Zalabya miaraka amin'ny mofomamy kely misy tamotamo
Ilay Jordaniana And Far Away, nanamarika eo amin'ny lahatsoratr'i Frankom, maneho ny fahasahiranan-tsainy mieritreritra ny mofomamy kely cupcake knafeh, milaza hoe:
Izao mihitsy no tena atao hoe famoronana. Tsy azoko antoka hoe nampanao azy ireo aho raha ka tany Jordana, mifanohitra kely amin'ny maha-Nabelsi ahy ny hevitra hanao knafeh teo ambonin'ny mofomamy kely, nefa tsy vitako ny tsy hankasitraka ilay hevitra.
Manolotra sary karazana mofomamy kely cupcake naroso tany Koweit ny Cupcake-themed blog Cupcake Take the Cake [Nohitsahan'ny Cupcake ny Cake].
“mofomamy natao hoan'ny Ramadany any Dubai; sary avy amin'ny Cupcakes Take the Cake, mofomamy avy amin'i Sugar Daddy
Ndeha ho any amin'ny Firenena mitambatr'i Emira Arabo, toerana nahazoan'ny mofomamy Cupcake tsena. Nanoratra momba an'ireo fivarotana maromaro ireo i Cupcakes Take the Cake. Raha mijery ny an'i Sugar Daddy any Dubai, mizara mailaka nalefan'ny lehiben'ny mpivaro-mofo amintsika ilay mpitoraka blaogy, izay manolotra ny iray amin'ireo mofomamy kely cupcake nataon'ny toeram-pivarotana hoan'ny Ramadany fotsiny:
daty mahajamba: Nametraka ny fomban-drazana fa nihinana daty ny mpaminany Mohammad tamin'ny famaranany ny fifadian-kaniny, ary dia eo lalandava ilay voankazo mandritry ny fialan-tsasatra. Tonga niaraka tamina spaonjy feno zava-manitra izahay izay nampangantsiahina tamin'ny kirema manitra kanely sy nasiana tsongona kafe kely.
Nefa koa, nanoratra i Mahryska, mponina hafa avy ao Dubai, momba ny toeram-pivarotana mofomamy kely cupcake tiany indrindra, ny Kitsch:
nankeny aho tamin'izay andro izay ary naka kafe sy mofomamy kely cupcake izay tena tsara jerena tokoa, eny e, tena tsara ilay izy!
♥ ♥ ♥ Fo 3 ho an'ny mofomamy kely cupcake nataon'i kitsch noho ny nanokafan-dry zareo toeram-pivarotana!
Ny The Haouse of Cakes no nanao ity cupcake 500 isa ity ho fankalazana ny androm-pirenena faha-37 ho an'ny UAE
Fivarotana iray hafa ao Dubai, Ny tranon'ny mofomamy [The House of Cakes], manana ny blaoginy manokana izarany ny sary tsy misy kianina -na mofomamy kely cupcake 500 amin'ny endrika sainam-pirenen'ny Emirats (jereo ny sary eo an-kavia).
Any Bahraina ny fijanonana farany amin'ity fihodinantsika indray mielatra momba ny mofomamy kely cupcake any amin'ny faritra ‘Afovoany Atsinana ity, toerana izay ampiasàan'ireo mpivarotra cupcake ny media vaovao mba hanapariahana ny feo [dokam-barotra]. Cupcakes Bahrain dia mitoraka blaogy eo amin'ny kianja malalaky ny mpampiasa blaogy hizarana ny sarin'ireo mofomamy keliny sy ny tsara ho fantatra momba ny toeram-pivarotany, raha toa ka manana toerana eo amin'ny Twitter sy Facebook kosa ny Clever Cupcakes hizarany ny fanazavana momba ny vokany toy izao:
clever cupcakes ihany no arosoanay! Mofomamy kely izay tsy ho adinonao mihitsy ..
Ataovy talanjona ny vahininao sy ny olon-tianao amin'ny alalan'ny fanafaranao ny clever cupcakes-nao.
Syrian flag cupcakes by Canadian bakery cococakes
Ho faranantsika miaraka amin'ireto teny avy amin'i Jad Aoun, mpitoraka blaogy Libaney, izay nanamarika fa ny fandrakofam-baovaon'ny New York Times dia sady miresaka ny fivarotana mofomamy kely cupcakes Arabo sy Israeliana sy ny sisa, sady nananihany:
Sao dia mba fotoana hihavanantsika rehetra izao manodidina ny mofomamy kely cupcakes misy frezy. Tsy te horosoana hommou na falafels isika izao, sa tsy izany?
mofomamy kely cupcakes Siriana (ary sary) avy amin'i cococakes